« Orange E-Sport Experience»: mpilalao 3, hisolo tena an’i Madagasikara any Dakar | NewsMada
Par Taratra sur 04/12/2018
Hotanterahina manomboka rahampitso 5 desambra, ny famaranana amin’ilay fifaninanana kontinantaly “E-Sport”, any Dakar. Fifaninanana izay handraisan’ny malagasy anjara. Nanainga ny alahady teo ireo solontenan’i Madagasikara hiatrika ity lalao ity.
Mpilalao miisa 50 avy amin’ny firenena 11 manerana an’i Afrika no andrasana ho tonga handray anjara amin’ny ity lalao famaranana ity. Anisan’izany ny mpilalao avy eto Madagasikara. Fifaninanana afrikana, fanao isan-taona, hanondrotana avo ny “jeu vidéo” ity lalao ity.
Tovolahy 3 no hitondra avo ny anaran’i Madagasikara any Dakar, mandritra izao fifaninanana “Jeu vidéo” izao. Ratsimiliavahoaka Ranto Manoro (Big Tom 2138), sokajy “Street Fighter”, Rakotoarison Mamitiana Michel (Gogo), sokajy “Asphalt” ary Ralainaivo Mamitiana Herilanto (Rayan), sokajy “PES 2019”. Ireo no voasafidy hiatrika ny “Orange E-Sport Experience” rehefa nahazo fandresena tamina lalao maro teto an-toerana, teo amin’ity taranja ity ary efa manana haavo teknika amin’ny fanaovana “jeu vidéo”. Izy ireo izay tohanan’ny Orange, mpiara miombona antoka amin’ny fikambanana “E-Sport” eto Madagasikara. Mirary ny Orange mba ho fifaninanana fakan-tahaka ity lalao afrikana amin’ny “jeu vidéo” ity ary mba hahafahana mitily ireo mpilalao afrikana vao misandratra ihany koa.
“Dakar Digitak Show”
Hifanindry an-dalana amin’ny lalao famaranana ny hetsika “Digital show” izay hampisehoana amin’ny fomba miavaka ny fahaiza-manaon’ireo mpisehatra amin’ny lafiny nomerika, toy ny “éditeurs de contenus” sy ny “développeurs” ary ny mpikirakira ara-teknika amin’ity sehatra ity. Izao hetsika izao dia haseho amin’ny alalan’ny hetsika ara-barotra, hampirantiana ny mahakasika ny tonton’ny nomerika sy ny “jeu vidéo”. Tanjona ny hampandrosoana sy hananganana sehatra miavaka amin’ny B2B ary hanomezana vahana ireo mpilalao manana ny maha izy azy. Eo ihany koa ny fampivondronana ny mpiantsehatra amin’ny lafiny “digital” manerana ny kontinanta afrikana sy manerana izao tontolo izao.